Vaovao iPad Mamaly: fanadihadiana momba ny seranam-piaramanidina Apple, Extreme sy TimeCapsule | Vaovao IPhone
Namoaka ny faritra "iPad News Responde" izahay tamin'ny fanontaniana napetrak'ilay mpamaky Xoxenel taminay:
Manana router iray nomen'i Telecable ahy aho, orinasako amin'ny Internet ary Airport Expres. Te hampitombo ny signal Wifi amin'ny seranam-piaramanidina aho nefa tsy avelany handeha aho fa mamela ahy hiditra amin'ny Wifi Network ihany. Rehefa manandrana manatsara ny signal aho dia mahazo lesoka ary very ny fifandraisana.
Afaka manao zavatra aho?
Ratsy ve ny ataoko?
Tsy azo atao io fiasa famerenana signal WiFi io raha averinao ny signal noforonin'ny Airport hafa. Hanararaotra an'io fanontaniana io isika hazavao ireo maodelin'ny seranam-piaramanidina misy, ny router Apple, ny asany lehibe indrindra ary ny fahasamihafana ifotony misy eo amin'ny maodely tsirairay. Mampahatsiahy anao izahay fa afaka mametraka ny fanontanianao amin'ity fizarana vaovao ity «Mamaly ny vaovao IPad»Ary isan-kerinandro no hifidianantsika ilay tena mahaliana.
Azontsika atao ny mihevitra azy io ho maodely antenantenan'ireo telo misy. Ny AirPort Extreme dia router "mahazatra":
Manohana ny teknolojia 802.11 a / b / g / n sy ny tarika roa miaraka (2,4GHz sy 5GHz)
Fampidirana USB 2.0 hampifandray ireo mpanonta na kapila mafy
Seranan-tsambo LAN Gig Ethernet Ethernet 3 hampifandray ireo solosaina na fitaovan'ny tambajotra
Seranana WAN Gigabit Ethernet 1 hampifandray ny modem na tariby DLS anao
Saingy misy endri-javatra sasantsasany izay mametraka azy ambonin'ny router maro ao amin'ny kilasiny. Ny iray amin'ireo lehibe dia izany mamela anao hamorona tambajotra vahiny. Raha misy olona tonga ao an-trano ka tianao hifandray amin'ny tamba-jotra ianao dia azonao omena azy ireo ny lakilen'ilay tambajotra vahiny ary hiditra amin'ny Internet ihany izy ireo fa tsy ireo fitaovana ampiarahinao, na kapila mafy, solosaina na mpanonta.
Ny fikirakirany dia tena tsotra noho ny Airport Utility. Avy amin'ny solosainao (Mac na Windows) na avy amin'ny fitaovanao iOS dia azonao atao ny manamboatra ny router miaraka amin'ireo dingana kely dia kely. Ho fanampin'izany, ity fampitaovana ity ihany dia ahafahanao mitantana mora foana ny tamba-jotra tsy misy tariby.
Misaotra ny USB ao aoriany afaka mampifandray kapila mafy ianao ary mizara izany manerana ny tamba-jotra, raha tianao harovana ny teny miafina. Mila mampifandray azy fotsiny ianao ary mampiasa ny Airport Utility anao hamaritana ny teny miafina (raha tianao izany). Ireo fitaovana rehetra mifandray amin'ny tamba-jotra anao manokana dia hanana fidirana eo noho eo. Azonao atao koa ny mampifandray mpanonta hizara azy amin'ny tamba-jotra, mora toy ny kapila mafy. Te hizara mpanonta iray ve ianao ary hampifandray kapila mangidy? Tena mora, mampifandray hub amin'ny USB ary ampifandraiso ireo mpanonta na kapila tadiavinao.
Ny Airport Extreme dia mamela anao hanitatra ny tamba-jotra WiFi. Apetraho ao anatin'ny tariby fandrakofana ao amin'ny Airport Extreme, Express na TimeCapsule anao indrindra izany dia hiverimberina, hanitatra ny tamba-jotra eo an-toerana. Tsy azo atao amin'ny alàlan'ny router rehetra izany, raha tsy amin'ny Airport Extreme, Express na TimeCapsule hafa ihany.
Tena mitovy amin'ny Airport Extreme fa misy kapila matevina naorina miaraka amina 2TB sy 3TB. Ny ambiny famaritana dia mitovy amin'ny Airport Extreme, na dia lehibe sy mavesatra kokoa aza ny TimeCapsule, ary volafotsy ny sary famantarana paoma eo an-tampony, ary fotsy ny Airport Extreme, noho izany mora ampiasaina izy io. Fantaro. Tsy misy fahasamihafana amin'ny asan'ny Time Capsule sy ny Airport, ihany ny fampidirana ny kapila mafy, fa izy io koa dia manana USB hampifandray mpanonta na kapila mafy.
Ny zandriny indrindra amin'ny fianakaviana, fa ny fisehoana ivelany dia mety hamitaka. Ny Airport Express dia manana ny asan'ny zokiny lahy:
Fampidirana USB 2.0 hampifandray mpanonta
Seranan-tsambo LAN Gigabit Ethernet 1 hampifandray solosaina na fitaovana tambajotra
Output audio hampifandraisana mpandahateny
Azonao atao ny mampiasa ny Airport Express kely hamoronana tamba-jotra WiFi amin'ny alàlan'ny fampifandraisana azy amin'ny modely DSL na taribinao ary hahazo tombony amin'ny tombony azo avy amin'ny tarika WiFi-n roa. Azonao atao koa ny manitatra tamba-jotra WiFi, raha mbola noforonin'ny Airport Express, Extreme na TimeCapsule iray hafa izy. Apetraho eo afovoan'ilay tamba-jotra izy io ary hanitatra ny fandrakofana. Ity fiverimberenana ity dia tsy miasa amin'ireo maodelin'ny router hafa.
Fa ny Airport Express dia manana endrika tsy ananan'ireo zokiny lahy: afaka mampifandray mpandahateny amin'ny famoahana feo ianao ary milalaova amin'ny alàlan'ny AirPlay izay atiny rehetra amin'ny solo-sainao amin'ny iTunes, ny iPhone, iPad na iPod Touch. Anisan'ireo zavatra tsy vitan'ny Airport Express raha oharina amin'ny Airport Extreme na TimeCapsule dia ny safidy hizarana kapila mafy. Ny USB aoriana dia natao hampifandraisana mpanonta ary hampiasana azy tsy misy tariby.
Manantena aho fa ity torolàlana kely ity dia nanampy anao hanazava zavatra vitsivitsy momba ny seranam-piaramanidina Apple samy hafa ary aza manao fahadisoana rehefa mividy maodely diso. Rehefa afaka taona maro niaraka tamin'ny Airport Extreme ary izao dia TimeCapsule dia afaka manome toky anao aho fa nanjavona ireo olana amin'ny tamba-jotra WiFi ao an-tranoko hatramin'ny nidiran'ity fitaovana ity tao an-tranoko. 100% azo atoro.
Fanazavana fanampiny - Fizarana vaovao: News iPad Responds
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Vaovao iPad Mamaly: fanadihadiana momba ny seranam-piaramanidina Apple Express Extreme, Express ary TimeCapsule
danielcip dia hoy izy:
Salama, fanazavana tena tsara. Misaotra anao
Mamaly an'i danielcip
Magatu dia hoy izy:
Tsara xoxenel mahita ny seranam-piara-manidina dia azonao atao ny manefy azy ho mamorona tambajotra Wi-Fi mazava ho azy fa ity no Tricom, Tricom izay atoroiko dia ny mamorona tamba-jotra Wi-Fi mitovy amiko aminao….
Mamaly an'i Magatu
Te-hanao fangatahana aho satria tsy tena mazava amiko araka ny fanazavana nomena.
Manomboka amin'ny fikirakira manaraka aho:
- router optic router ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny
- PLC izay manome fandrakofana ethernet an'ny PC amin'ny efitrano hafa (tsy tonga ny famantarana Wi-Fi)
- HDD roa an'ny 2TB mifandraika amin'ny PC amin'ny alàlan'ny USB
Ny fanontaniana dia. Miaraka amin'ny Airport Extreme (miaraka amin'ny 4Tb amin'izao fotoana izao dia tsy mahaliana ahy ny TC), azo atao ve ny mampifandray azy amin'ny PLC hanana Wi-Fi avy amin'io efitrano io mandritra ny trano sisa? Azoko fa hifandray amin'ny alàlan'ny ethernet amin'ny seranana WAN izy io ary hamorona tambajotra Wi-Fi vaovao izay hifandraisako amin'ny takelaka, solosaina finday ary finday raha any amin'ny faritra misy ny trano misy ny fandrakofana Wi-Fi an'ny modem "ofisialy" ny mpikirakira Internet ahy dia tsy hahatratra
Raha ny fitsipika dia tokony ho izany no izy, na dia mbola tsy nanandrana nampifandray azy tamin'ny PLC mihitsy aza aho. Ny tsy azoko lazaina aminao dia ny hafainganan'ny vitanao, miankina amin'ny fahombiazan'ny PLC anao izany.
Misaotra an'i Luis tamin'ny valiny.
Fantatro fa ny fifandraisana amin'ny PLC dia ho toy ny fampifandraisana mivantana amin'ny iray amin'ireo RJ45 an'ny router.
Mikasika ny hafainganam-pandeha, manana Devolo 500 PLC (500mbps teôlika) misy fifandraisana Movistar FO aho. Ny famindrana dia manana haingam-pandeha voatazona hatramin'ny 55-60 mbps aho. Mihoatra noho ny ampy ny mitazona sary mihetsika 15-20Gb amin'ny fahitalavitra efitrano fandraisam-bahininao.
Handinika ny magazay Apple aho hijerena raha manana "refurbished" Airport Extreme izay mora kokoa ho ahy izy ireo.
Salama namana, manana Time Capsule aho ary tiako ho fantatra raha afaka miditra ao aho (sary, mozika, sarimihetsika, sns.) Avy amin'ny ipad, iphone na apple tv-ko nefa tsy nirehitra ny Imac. Misy rindranasa mamela azy io ve?
Misaotra betsaka ary arahaba
Arnau rovira dia hoy izy:
Raha mifandray amin'ny wifi iray ihany izy ireo dia mampiasa goodreader
Valiny ho an'i Arnau Rovira
Mampiasa filebrowser aho, fa araka ny nolazain'ny mpamaky hafa anao, mamela izany ihany koa ny goodreader.
Tamin'ny 27 martsa 05, tamin'ny 2013:15 hariva, nanoratra i "Disqus":
Misaotra betsaka an'i Luis sy Arnau, rehefa manamboatra ny Goodreader ianao dia nividy azy aho ary tsy fantatro hoe aiza no hametrahana ny IP an'ny Time Capsule. Fanontaniana iray hafa, hamela anao hijery horonantsary mivantana izay notahirizinao tao amin'ny TC ve ianao?
Misaotra betsaka anao sy tatitra tsara!
Manana TC mifandray amin'ny router Linksys aho. Te hahafantatra aho raha afaka miditra ao amin'ny iphone / ipad ivelan'ny trano.
Riggins dia hoy izy:
Salama, miala tsiny aho milaza fa mahatsiravina ny zavatra niainako tamin'ireo trano ireo. Mipetraka ao amin'ny triplex aho, izay sady tsy trano no tsy misy, trano 140m2 fa amin'ny rihana telo. Ny router (avy amin'ny Vodafone) dia manana azy amin'ny faran'ny zava-drehetra ary miaraka aminy, tonga hatrany amin'ny rihana afovoany ny famantarana fa tsy any ambony.
Nanomboka nandavaka aho ary namaky fa ny Airport Extreme dia manana halavirana betsaka kokoa noho ny router Vodafone mahavariana ary nividy iray aho. Nametraka azy aho ary mitovy ny habaka mitovy aminy.
Taty aoriana dia namaky aho fa afaka mampifandray ny seranam-piaramanidina amin'ny alàlan'ny Wi-fi amin'ny Extreme mba hahatratra ny trano iray manontolo. Ary nividy iray aho. Nametraka azy teo amin'ny rihana afovoany aho, saingy tsy tonga tany ambony rihana. Nisafoaka ny dimy ambin'ny folo.
Nihevitra aho fa, rehefa vita ny fampiasam-bola dia tsara kokoa ny manangona vola kely amin'ny Express hafa hahatrarana ny tena tanjoko.
Eny, apetrako amin'ny rihana ambony ny 2nd Express ary tsy misy na inona na inona. Ny jiro maitso kely dia mivadika manondro fa manana famantarana Wi-Fi izy fa any ambony tsy manana Wi-Fi ary tsy manana na inona na inona aho, ary mbola ratsy kokoa aza, raha manana ny Express mifandraika eo ambony aho, dia tsy manana Wi-Fi amin'ny rihana afovoany.
Avia, loza iray tanteraka taorian'ny namelako vongana iray ho ahy.
Valio amin'i Riggins
Background Manager dia mitondra multitasking tena any amin'ny iOS (Cydia)
Ahoana ny fampiasana Google Music All Access avy amin'ny iPhone